NYI LYNN SECK 18+ DEN: My blog is banned
Posted by NLS at 1/08/2010 05:58:00 PM
23 Responses to “My blog is banned”
ဒီမှာတော့ ဆက်ရနေဆဲမို့ နှစ်ရက်တစ်ကြိမ်လောက် ရိုက်မိနေတဲ့.. Blog.NyiLynnSeck .. . ဆီ ဆက်လာနေဦးမှာပါ။ ယူစရာတွေ ရှိသလို တွေးစရာတွေလည်း ရှိနေလို့.. ဆက်လာမယ်ဗျာ။
ဟူးးးးးးးးး ဆိုးးးးးပါ့ အကိုရေ အမြဲလာနေဦးမှာပဲ စိတ်တာချ မြန်မာပြည်တွင်းထဲက လူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ဒါပေမဲ့ သူတို့ဘန်းလေ အကိုတို့ကို ပိုပြီးလေးစားလေပါပဲ အလုပ်မရှိ အားနေ ထိုင်ဘန်းနေကြလား မသိဘူးးးးးးးးးး(
Reader ပါဘန်းပလိုက်မှ ရွာပတ်နေပါဦးမယ် ဆရာ။
အင်း ပြောမလို့ပဲ။ reader ပါ မြင်သွားဦးမယ်။
ဘယ်လိုပဲ ပိတ်ပိတ်၊ ထွက်ပေါက်တော့ ရှိမှာပဲလေ။ ငွေကုန်ခံပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်တော့ ... ။ ဘယ်လိုပိတ်ပိတ် ဖတ်ချင်တဲ့သူတော့ ရောက်အောင်လာမှာပဲ လို့တွေးမိပါတယ်။ ရီဒါလိုနေရာကနေ ဖတ်လို့ရသေးလို့ မဆိုးသေးပါဘူးလေ။ Better than nothing ပေါ့။
သူတို့က Blogger ကို B2 bomber ထက်ပိုကြောက် နေတာဗျ။
အမြဲလာ ဖတ်ပါမယ် ဗျာ
ကြိုး စားမှုကို လေးစားလျှက်
ဘလော့တော့ဘန်းပြီ။ ရေးတဲ့သူပဲ ဘန်းဖို့ကျန်တော့တယ်ဟေ့ရောင်ရေ။ :D
ဆရာကြီးက ဖြစ်နေတာဆိုတော့ တစ်ခုခု ဖြစ်နေတာ ထင်တယ် လို့ ပြောရဲဘူးလေ။
အဲဒီမှာလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေက ခင်ဗျားရဲ့အောင်မြင်မှုကို မနာလိုလို့ ဘန်းတာ။ စောက်သုံးမကျတဲ့ကောင်တွေ။ ဘေးလွယ်အိတ်လိုကောင်တွေ ရှိနေသရွေ့ ကျူပ်တို့နိုင်ငံ ကျွန်ဘ၀ကတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အေးဗျာ ကျွန်တော့် ဆိုဒ် http://www.engineer4myanmar.com ကိုလဲ ပုဂံက ဘန်းထားတယ်ကြားတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အပင်ပန်း ခံ အနစ်နာခံပြီး လုပ်ထားတာလေးတွေကို သူများတွေက တစ်ချက်တည်းနဲ့ ဖျက်ဆီးတာ ခံလိုက်ရတာ ရင်နာမိတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ဆို နည်းပညာ သန့်သန့် နဲ့ ပညာရေးဘက်ပဲ ရေးနေတာ။ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ဝေဖန်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်လို့ရသလောက် ဆက်လုပ်ရအောင် ကိုညီလင်းဆက်ရေ။
အေးဟာ။ အမလည်း သတင်းကြားကြားခြင်း လာပြောတဲ့သူကို မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တောင် ဇွတ်ငြင်းနေသေးတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတာ။ ဆက်သာ ချဟာ။ စိတ်တိုလိုက်တာ လွန်းပါရော။
အမ်.. ဘာကိစ္စဘန်းရတာတုန်းးးး ဒုတ်ခ.... အလကားနေရင်း အလကားးး သူ့ထက်သာမနာလို..
ဘန်းချင်စရာ ရုပ်ဖြစ်နေလို့ :D
ကျွန်တော်တို့ itmen.myanmarbloggers.org လည်း ဘန်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သည်းမခံနိုင်လို့ Post တစ်ခု ရေးပြီး တင်လိုက်ပြီဗျာ။
google reader ကိုတော့ ဘန်းလို့ မရပါဘူး။ reader.google.com နဲ့ www.google.com ဟာ ip တစ်ခုတည်း သုံးထားတာမို့ reader ကို ဘန်းတာဟာ google ကို ဘန်းတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ညီလေးရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအစဉ်လေးစားလျှက် အမြဲအားပေးနေတယ်..
you the man,I'm very proud of you.you do good job whatever they ban.
I'm afraid my blog (in Spanish) about Burma's struggle for democracy is banned too. But I keep writting:
Birmania Libre / Free Burma